Arsenal oo Kooxaha Liverpool iyo Manchester City kula soo biirtay tartanka loogu jiro daafac ka dheela dalka Spain – Gool FM
(London) 03 Agoosto 2020. Arsenal ayaa la soo sheegayaa inay Kooxaha Liverpool iyo Manchester City kula soo biirtay tartanka loogu jiro saxiixa daafac ka dheela dalka Spain oo aad loo doon-doonayo.
Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa diyaar u ah inay Liverpool iyo Manchester City kula dagaallanto saxiixa daafaca dhexe ee Naadiga Sevilla ee Diego Carlos.
Inkastoo xaqiiqda ah in Arsenal laga filaayo inay la falgasho miisaaniyad aad u xaddidan xagaagan ay halkeeda taallo, haddana tababare Mikel Arteta ayaa la rumeysan yahay inuu qorsheynayo inuu dhammeystiro shaxdiisa si kastaba ha noqotee.
Tababaraha Gunners ayaa u aqoonsaday daafacan inuu yahay ahmiyada koowaad si loo xoojiyo kooxda ka hor kal ciyaareedka 2020-21, laakiin qiimaha badan ee Carlos ayaa caqabad ku noqon kara saxiixa 27-sano jirkaan.
Sida ay warinayso Jariiradda The Telegraph Kooxda Sevilla ayaa diyaar u ah in ay hoos u dhigto qiimaha ay ku dalbanayso laacibkan, markii hore waxa ay ku rabtay 68 milyan oo ginni, laakiin kooxda La Liga ee dheesha ayaa weli doonaysa lacag badan oo 50 milyan oo gini xiddigan ka soo jeeda Koonfurta Ameerika.
Warbixinta ayaa sheegaysa in Arsenal laga yaabo inay cunaqabateyn ku iibiso labada ciyaaryahan ee khadka dhexe, Matteo Guendouzi iyo Mesut Ozil si ay uga caawiyaan raacdada Carlos, laakiin Gunners ayaa ku qasban inay ka adkaato Liverpool iyo Man City oo xiiseynaya xiddigan si ay u helaan daafaca aadka loo raadinayo. .
Carlos ayaa u saftay Kooxda Sevilla 35 kulan oo horyaalka La Liga ah xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay, iyadoo Kooxda Julen Lopetegui ay ku dhammeysatay kaalinta afaraad, isla markaana ay xaqiijisay u soo bixitaankeeda Champions League.